iPhone 7 Hapụ Ụbọchị 2015: Mgbe nwere ike ị na-ahụ iPhone 7 / iPhone 6s?
Part1: Mgbe ga ọhụrụ iPhone-atọhapụ ha?
Part2: Olee na-akpa na-iPhone
The ogologo echere iPhone bụ akpatre ruru. A ọnụ ọgụgụ nke leaks nyere tech enthusiasts gburugburu ụwa a nso anya n'ime ọhụrụ iPhone si atụmatụ. Ntule kemgbe jupụtara n'elu nnọọ ihe ọhụrụ iPhone ga-ele anya dị ka ma ọ bụ ihe ọhụrụ atụmatụ anyị pụrụ ịtụ anya. Ezie na ndị mmadụ nwere ike na-eche na ndị dịgasị iche iche gburugburu ọhụrụ iPhone gụnyere ufụn ụbọchị, e nwere ụfọdụ na asịrị ahụ nwere ike inye anyị ghọta ihe na-atụ anya. Ụfọdụ n'ime nụrụ kepu kepu na atụmatụ na-agụnye:
The ọhụrụ ekwentị na-atụ anya nwere ọhụrụ ohere panel nke nwere ike-onwem na Force Touch Integration
O nwekwara ike bịa na-kwalite mkpisiaka mmetụta
Na-echebe efere na azụ nke LCD ga ugbu a-glued na ebe. Nke a na atụmatụ nwere ike ịkpaghasị na-atọ ọzọ ihuenyo Ndozi ọ bụ ezie na o nwere ike nakwa belata emebi
Ọ na-nụrụ kepu kepu na ọhụrụ handset nwere ike ịbụ na a ụzọ gburugburu "bendgate" na a ọhụrụ "S" imewe.
Ọ pụrụ ịbụ okpotokpo karịa okenye ụdị
Ọ na-nụrụ kepu kepu na ọ bụ ekwentị na mere nke a ike n'ụdị aluminum nke nwere ike ịbụ instrumental na mbenata mmebi ọ bụ ezie na ya pụrụ ime ka ekwentị arọ.
Nnukwu ajụjụ niile Otú ọ dị, mgbe anyị nwere ike inwe aka anyị na ọhụrụ iPhone.
Mgbe a ga-ọhụrụ iPhone 6s (Plus)-atọhapụ ha?
A bụ omenala Apple ka na-eche nche ntọhapụ ụbọchị nke ọhụrụ a iPhone dị ka a anya na-eche nche na nzuzo. Ntule banyere ngwaọrụ ọhụrụ malitere ọtụtụ ọnwa azụ ma ọ bụ naanị nso nso a na anyị na-amụta na chọrọ tọhapụ ụbọchị.
Ọ bụ ezie na ụbọchị na-ma na-egosi na Apple, ọ aghọwo ugbu a doo anya na ndị ọhụrụ iPhone ga-wepụtara na Wednesday September 9. On a otu ụbọchị anyị nwekwara ike na-atụ anya ga-esi ọhụrụ iOS 9.
ka anya na ntọhapụ ụbọchị site Country. Ndị a bụ ụbọchị mgbe iPhone-atụ anya ga elu maka tupu iji ma ọ bụ ire ere.
Ego ọhụrụ iPhone 6s (Plus) tọhapụrụ ụbọchị n'ụwa n'okpuru:
India September 25th
Pakistan September 25th
Dubai UAE September 25th
Australia September 25th
Japan September 25th
China September 25th
Germany September 25th
France September 25th
Niile nke ụbọchị ndị a nwere ike ịgbanwe ebe Apple bụ ma na-akwado nke ọ bụla n'ime ha. Ọkachamara Otú ọ dị ekweta na tupu iji ụbọchị nke September 18 bụ pụtara-ezi ezi. Ọ na-Otú ọ dị-atụ anya ka kụrụ echekwa gburugburu ụwa na September 25th.
Olee otú na-"Mbụ" na-iPhone 6s (Plus)
Onye ọ bụla na-atụ anya ntọhapụ nke ọhụrụ a iPhone. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịbụ ndị mbụ a na-esi na gị aka nke ọhụrụ iPhone, anyị nwere ole na ole Atụmatụ inyere ya aka. Tupu anyị ga-esi Atụmatụ Otú ọ dị, ọ dị mkpa na ị na-aghọta na otú adịghị anya ị ga-esi gị aka na iPhone pụrụ ịdabere na mpaghara gị, ntọhapụ ụbọchị maka mpaghara gị mgbe ụfọdụ ọbụna na oge mpaghara. Ebe a bụ ihe i nwere ike ime iji na-enweta iPhone n'ihu ihe nile enyi gị.
1. Nọrọ asian
Iji nweta ruo ụbọchị ọmụma banyere ntọhapụ nke ndị ọhụrụ iPhone, ị ga-mkpa anọ asian. Dabara nke ọma n'ihi na ị, e nwere ọtụtụ ozi ọma na saịtị na blọọgụ na niile ọhụrụ ọmụma. The ọmụma nwere ike ịgbanwe otú ọ dị mkpa ka ego mgbe nile otú i nwere ike nwere ihe ọmụma ziri ezi na mgbe ịzụta.
2. Bilie gị tupu iji na n'oge
N'ihi na mba ebe tupu iwu ga-abụ dị, hụ na ị na-ahụ ụbọchị nke tupu iji nri na-etinye na gị iji na oge. Otú a mgbe ha na-tọhapụrụ echekwa n'ụwa nile, ị ga-enwe mbụ site n'onye nke ọ-eji nyere iwu n'oge.
3.-esi ụlọ ahịa na ntọhapụ ụbọchị nnọọ n'oge
Ọ bụrụ na ị funahụrụ na tupu iji ma ọ bụ tupu iwu ndị adịghị gị mba, ga-esi ụlọ ahịa na ntọhapụ ụbọchị n'oge. Ọ bụ nnọọ ike ịbụ na ọtụtụ ndị ọzọ na-eche otu tọhapụrụ ụbọchị ị bụ na ọ bụrụ na ị ga-esi n'ebe mbubreyo, ị nwere ike na-eche maka ọzọ ntọhapụ. Buru n'uche na na ntọhapụ ụbọchị, iPhone echekwa agbasaghị na-akarị n'ọtụtụ ma na-e n'oge ga-azọpụta unu oge.
> Resource> iPhone> iPhone 6s (Plus) Hapụ Ụbọchị 2015: Mgbe nwere ike ị na-ahụ iPhone 6s (Plus)?